Aza manaja frantsay rehefa tsy hajainy - Dinika forum.serasera.org
Blackeagle - 14/04/2012 14:44
dadabe - 18/05/2012 13:50
ekena bainina a, tohanako 100 %
Tibao - 02/06/2012 00:28
Raha izaho manokana ireo frantsay somary "arrogant" ireo tsy asiko sira mihitsy, na dia miseho be vola aza.
Satria koa anie firany fotsiny ianao any amin'ny taniny any na dia voasazin-dalÃ¡na aza ny fanavakavahana ara-dokombolonkoditra.
Mikasika ny ambasady indray, dia raha tsy mitodi-damosina amin-dafrantsa isika malagasy dia ho alikalikainy mandrakariva isika. Tsy eto amintsika irery no misy an'izany fa eraky ny zanatany frantsay taloha (Senegaly, Mali, Côte d'Ivoire...).
Isika ihany koa mbola milelaka azy amin'ny fomba ofisialy satria nataontsika ho teny ofisialy ny teniny, ka noho izany izy tsy hivaky loha ny hianatra ny tenintsika mihitsy ; kanefa amin-jareo anisan'ny mari-panajana ary "volonté d'intégration" izany hoe mianatra ny teny ary ny firokin'ny tany ipetrahana izany. Ka noho ny isan'ireo frantsay miteny malagasy tahaka ny malagasy, heveriko fa tsy manaja ny taniko ny ankamaroan'ireo frantsay miaina any madagasikara, ary noho izany tsy raharahiko mihitsy.
Na dia miseho manankarena aza izy ireo, dia mba mendrika ihany ny tena fa asa milefitra.